Wiricheya Headrest - Musoro weWheelchair
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya Zvishongedzo / Wiricheya Universal Headrest
Sarudza chisarudzo ... Inokodzera 14 ″ - 16 ″ yakafara Inokodzera 16 ″ - 18 ″ yakafara Inokodzera 20 ″ - 22 ″ yakafara (+ $ 15.00)
Wiricheya Headrest yakawanda
Categories: Mazuva ese Aids, Wiricheya Zvishongedzo, Wiricheya Universal Headrest
hwiricheya Musoro wepamusoro we hwiricheya Features:
Karman® Yenyika Yese Kupeta Musoro yakagadzirirwa kukwana mavhiripu ine 7/8 ing Tubing, uye inopetwa ne hwiricheya saka hazvidi kubviswa. Iyo inoratidzira yakakura kwazvo yekugadzirisa, kusanganisira kukwirira uye kudzika kugadziridzwa kune kwakanyanya kunyaradzwa. Yakapetwa musoro wemusoro une mweya unofema pamusoro unobvumidza yakawedzera nyaradzo uye kusimba.
Karman Healthcare's nyowani hwiricheya kupeta headrest kwakanakira vese hwiricheya vashandisi vari kutsvaga yakawedzera nyaradzo pamutengo wehupfumi. Iyo aruminiyamu furemu inobvumira simba uye kureruka zvisingawanikwe mune imwe simbi Hardware yeyakajairwa misoro. Kutsvaga chiyero chenyaradzo uye tsigiro yakamisikidzwa zvakanaka yezvinodiwa zvezuva nezuva zvakakosha mukushandisa kwenguva refu mu hwiricheya.
Check out kwedu wiricheya chikamu uye bvunza a Dealer kuti uone kuti ndechipi chigadzirwa chaunogona kuwana nenhumbi nhasi. Patent dhizaini inobvumira kupeta kana ichidonha hwiricheya. Hapana maturusi anodikanwa, hapana kubviswa kunodiwa kana uchipeta nekuchengetedza hwiricheya. Musoro uyu we mavhiripu inokwana chete 7/8 ing tubing, macheya mazhinji emawoko anouya nehupamhi uhu hwakaringana neiyi musoro wepamusoro.
Yenyika Yese Kupeta Musoro UPC #
13 × 6 × 9 mukati